Banyere Anyị - Shanghai Ziling Packaging Co., Ltd.
Shanghai Ziling Packaging Co., Ltd. bụ otu n'ime ndị isi nke Cap Seal Liners Manufacturers na China, tọrọ ntọala na 1990s, bụ ọkachamara na n'ichepụta aluminom induction akara Liners, iko akara liners, Pressure-sensitive sealing liner, Eva ụfụfụ Liners, EPE amfụfụ Liners , ịgbanye akara akara, wdg.
Ngwaahịa anyị dị n'ọtụtụ ebe maka ngwugwu Pharmaceuticals, Foods, Cosmetics, Lubricant, Pesticides, wdg. Site na nnukwu ọrụ nke igbochi nchapu mmiri na mmiri mmiri, mgbochi adịgboroja, ma gbasaa oge nchekwa ngwaahịa.
Companylọ ọrụ anyị dị na 601, Laolu Road, Pudong New District, Shanghai. Osisi anyị dị nso na Port Yangshan na Pudong International Airport. Transportationgbọ njem anyị na-adaba adaba.
Anyị ga-anọgide na-esi ọnwụ na ọhụrụ, ma na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ dị n'ụlọ na mba ọzọ na-adabere nha anya na uru ọ bụla, raara onwe ha nye ịnye ngwaahịa na ọrụ dị elu.
Anyị ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị afọ 10 ahụmahụ na mmepụta technology. Na ọkachamara oru nnyocha na mmepe, na nọgidere ịzụlite ma melite ngwaahịa, anyị technology larịị na mgbe niile na otu ụlọ ọrụ na-na a na-eduga ọnọdụ.
Nchịkwa nke ụlọ ọrụ anyị dabere na GMP, anyị eguzobewo mmepụta na njikwa njikwa, (njikwa njikwa njikwa, nyocha na nyocha), ụlọ ọrụ ahụ nwere anụ ahụ na kemịkalụ, yana ịdọtara ụlọ nyocha (10,000) maka akụrụngwa. , nyocha ngwaahịa na ule.
Tọrọ ntọala na 1990, mgbe ihe karịrị afọ iri nke mbọ, ụlọ ọrụ anyị nwereworị ọdịnala ụlọ ọrụ ya pụrụ iche. Na 2006, anyị na-eduzi mgbanwe zuru oke dị ka osisi dịka ogige, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ugbu a 50 percent.
Clublọ ọrụ nke ụlọ ọrụ na ndị ọrụ nyere, ụlọ ọgụgụ, na ndị ọrụ ndị ọzọ, pụọ maka ezumike, ntụrụndụ, mmụba ihe ọmụma nke ebe, ndị ọrụ nwere ụlọ karaoke audio-visual room, ping-pong room, chess na dominoes room. Iji meziwanye ogo ndị ọrụ na-eme ka njikọta ha kwalite, ụlọ ọrụ ahụ na-ahazi ọzụzụ ọkachamara mgbe niile, ihe ọmụma teknụzụ, asọmpi nka na ihe ndị ọzọ, ndị ọrụ ụlọ ọrụ na akwụkwọ akụkọ ha kwa izu na usoro kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ma bipụta ọrụ nke aka ha, yana na na.
Enterprise ka toro na-aga n'ihu mmepe nke ụlọọrụ omenala, anyị na-adabere na anyị nkịtị mgbalị na nkwado gị, nkwakọ Shanghai Purple Link Limited ga-azụlite ọbụna mma!